Kitaba Tesfayee Gebreab qoofa uguran miti wayee Oromoo bareesutuu uguramee.
https://www.dropbox.com/s/hlrcpg9u8a59jsw/Mastawesha%3D3-1.pdf Bana dubsa ?
Habasha amanun keenya wagga 130 ol dhiigi Oromoo akka dhangala'uu goocha jira. Ijoolen Minilik amoo wa’ee Oromoo dubachuu, wa’ee Oromoo bareesuu fi ani Oromoo dha jeechun yakka ta'uu isaa barana ciimsani murtefatani jiru. Tarkanfin Netsanat Publishers Wa’een Oromoo akka hin maxnfamnee goochuu kun Raggalee addaa addaa Habashoon mana Tesfaye Gebreab hataani WaldaMechaeal Meshasha webste irratti erga basee booda Paltak Room Habasha, website, TV fi Radio Esat irratti dula cimma banani jiru. Kitaba Ye Burqaa Zimita jeedhu Tesfayee Gebreab Oromoon Amhara akka fixuuf barreese jeechun ergasi boodas Ye Gazexanayuw Mastawasha irratti wa’ee Oromoo heedu barreese ammas Ye Sidatanyawu Mastawasha irratti wa’ee Oromoo barressa jira jeechun Tesfayee balalefatan. Mirga barresuu fi dubisuu kan hin kabajene Habashoon biyya alatti ilee Tesfaye Gabreab wa’ee Oromoo jeecha tokko ilee akka hin barreesine uguramee jira. Ugurii Kitaba Tesfayee Gabeab irratti goodhamee dulaa Oromoo irratti baname waan ta’eef Oromoo Miiliiyoonii 50 lafa ka’ee balalefachuu qaba. Kitaabi kun Atataman Maxanfamee Ganda Oromiyya hunda keessatti fi bakka Oromoon jijru hundatti dubifamuu qaba. Kana irratti Oromoon bakka hundatti mari’achuu qaba. Mariin kun biyya ala fi biyya keessatti Oromummaa Cimmisuu, Biyya Oromoo ijaruu, Oromo First fi dhadanoolee kan biroo jalati mariin adeemsifamuu qaba.
Habashoon Amhaaraa ykn Haawitoon siirna Minilik ( Moresh, Ginbot 7, TGC (Shango), arbanyoch, kkf) ammoo utuu Angoo ilee hin qabatiin TPLF (Tigray) Caalaa Oromoo fi Oromummaa irratti dulaa jiru. Nama ani Oromoo dha jeedhe, wa’ee Oromoo dubatee ykn wa’ee Oromoo barreese hunda Media Habashaa kami irratu akka hin dubanee, ykn hin barreesinee goocha jiru. Jawar Mohammed ani dursa Oromoo dha, Ethiopiuman utuu ani hin fudhtiin humnan na keenamee jeechun isaan, Terrorist jeedhamee murten du’aa Habashoon itti Murteesan jiru. Abdi Fixee labasi Jawar irratti darbee kana balalefachuu isaatiin Haduun(Albeen) Morma isaa kutuun Washingiton DC keessatti ajeesuuf turan. Mohammed Adamo, Gaazexessitoota fi Hayuulee Oromoo hunda irratti labsi du’aa labsan jiru. Oromoon kana caalisee ilaaluu hin qabu. Sababin isaa uni kana waan caalifneef Kitaaba Tesfaye Gebreab wagga 4 guutuu irratti hojeete barreese dhiyeese Uguramuuf saxilamee jira. Utuu Gaafa isaan Jawar, Abdi , Mohammed fi hayyoota Oromoo hunda irratti duluu egalan, unisii biyya keessa fi biyya alati irratti dulee lafa keenya keessa Habasha basuu egalee Kitaabi Tesfaye Geberab hin uguramu ture, caalisun keenya nu tufachisee jira.
Haal Habashoon deema jiran heedu hamacha dhufn isaa goocha isaani irraa heedu baranee jira, duratti ilee uni irratti wagga 130 goodhama ture, ini ama keessatu barana ammoo lafa irra nu baleesuuf kan muratan fakkata. Kun kan egalamee Erga Andargachew Tsige Oromoo tufachuun ibsaa ESAT irratti keene booda. Ani Oromoo dha jeechuu Habashooni dhorka jiru, Wa’een Oromoo media kami irratu akka hin dubatamne goodhan jiru. Wa’ee Oromoo Kitaabi ibsuu akka hin barreefamne goocha jiru. Addaa fi Afaan Oromoo baleesuu dula goocha jiru. Kitaaba Tesfaye Gebrab wa’ee Oromoo waan barreefamee keessa basii jeedhan akka hin maxanfamnee uguran jiru. Median Oromoo dhaabbachuu banan harka Habasha ijoole Minilik jalati kufuu keenya. Media Oromoo Dhaabbuuf Dargagoon Oromoo, Hayuuleen Oromoo, Haawaasi Oromoo fi Dhaabilee Oromoo hala duree tokko malee walga’an Mari’achuu qabna. Media Oromoo ijoolee Oromoo qulqulun Barana bu’urefamuu qaba. Kun waan yeroo keenamuuf mitti. Garbumaan keenya wagga 130f utuu dhifma nun hin jeedhin amalee Amhaarii nu garbonfachuuf deemtuu fi Tigre nu garbonfachaa jirtuu falmachuu caalaa waan hojeetamuu hin jiru. Falmachuu dhifnee garbumaa siimachuuf of qoophesuu mana du’aa wayaa.
Kitabi Tesfaye Gebreab Barreese Habashoon fi dhaabii Ginbot 7 kara Netsanat Publisher akka hin maxanfamnee goochun isaan erga beekame asi Oromoo Kitaaba Habashan Maxansuu tokko ilee akka bitee hin dubfnee, Siirba Afaan amhaaran sirribamuu akka hin dhageefanee, Media Habasha kamuu akka hindhagefanee, ESAT TV fi Radio, paltak Habasha hunda uguruu qabna. Dargagooni Oromoo Europa fi USA jiran Haawassa Oromoo hunda sochosun Murtee dabarsuuf deemuu. Murteen wal fakkatuu fi murtee cimman biyya Oromiyaa keessatti egalamuu qaba. Habashna erga Oromoo irratti ugura ka’uu egalan Habashooni lafa Oromiyya irra jiran hundi adabamuu qabu. Kitaabni wa’ee Oromoo caqasuu akka hin maxanfamnee goochuun, nami ani Oromoo dha jeedhe yaakamuu caalaa waan Oromoo irra ga’uu hin jiru. kanaafuu Oromoo biyya ala fi biyya keessa jiru Habashoota irratti uguraa gosa hunda irra ka’uun murtee wal gala dabarsuu qabna. Erga isaan Oromummaa keenya baleesuuf ugura uni irra ka’aan uni amoo bishan fi midhan isaan dhorkine ugura jiruu fi jijireenya isaan baleesuu ka’uu qabna.
Oromiyyan Ni Bilisoomtii